Archive du 20161129
Kolikolin�i Claudine A&C Sahirana ny Bianco
Mbola voatana hanaovana fanadihadiana eny amin�ny foiben�ny birao mahaleotena momba ny kolikoly na ny Bianco eny Ambohibao amin�izao fotoana izao, ny ben�ny tan�nan�ny kaominin�Ambohimahamasina, Tsabo Pierre, raha ny vaovao farany.
Hetsika ara-tsosialim-bahoaka Mihetsika indray ny Depiote Rasoanoromalala Horace
Vita ny fivoriana isan-tsokajiny tetsy sy teroa natrehana izay azo ambara fa mandalo avokoa dia mitodika amin�ny fikarakarana ny vahoaka ifotony
Fiarahamonim-pirenena Hitety faritra hametraka ny dina hifampifehezany
Hitety faritra hametraka ny dina hifampifehezan�izy ireo ny fiarahamonim-pirenena.
Taratasin�i Jean Veloma ry vahiny !
Manakory e ! Tsy andrinareo mihitsy ry Jean izay nandaozan�ireny havantsika ireny ny tan�na an ! Vao vita ilay fety makotrokotroka nandraisana an-dry zareo dia naverinareo nararaka niaraka tamin�ireo oram-be omaly daholo indray ny kitoatoa rehetra.
Vita ny frankofonia Miverina ny gaboraraka
Nimasoan�ny mpitondra ny fandrindrana ny tan�n-dehibe nialoha sy nandritra ny frankofonia, ary nilamindamina ny renivohitra tao anatin�izay fotoana izay.
Asa tamin�ny frankofonia Voafitaka ny mpitandro ny filaminana
Mipoitra tsikelikely ny marina momba ny fanatanterahana ny fivoriana an-tampon�ny frankofonia.
Orana iray andro Dibo-drano sahady Antananarivo
Efa niakatra ambony sahady ny rano omaly tamin�ny faritra maro teto Antananarivo Renivohitra, toa an�i Besarety, Petite Vitesse, Ampefiloha, Isotry, Ankazomanga, Andravoahangy�
Epp Ambohipeno-Ambohimanambola Nahazo fanavaozana avy amin�ny fiaraha-miasa 3 P
Hanovonana ny fanampiana azy avy amin�ny fanjakana malagasy eo amin�ny fikarakaran�ny sosialin�ny mponina isam-pokontany
Minisitra Onitiana Realy Nanolotra masomboly ho an�ny any Atsimo
Tamin�ny fitsidihana nataony tany amin�ny faritra Atsimon�ny nosy iny tamin�ity tapatapaky ny volana novambra ity, dia nanolotra masombolina katsaka sy antaka (dolique) ho an�ny mponina tany Androy
Mpianatry ny oniversite Tokony ho vahaolana nefa lasa olana
Mampiavaka ny tontolon�ny fianarana ambony eto amintsika ny fisian�ny vondron�ny mpianatra mitsitokotoko ho fikambanana avy amin�ny faritra izay maro tokoa.
Halatra findany eny amin�ny 67 Ha Voasambotra i Pascal
Lehilahy iray no tonga nametraka fitoriana tao amin�ny kaomisarian�ny polisy etsy amin�ny Boriborintany fahafito 67 ha ny 27 novambra lasa teo noho ny sinto-mahery nihatra taminy.
Fikambanana �Demoiselles de Keur� Hanampy ireo fianakaviana sahirana
Mijaly ny vahoaka Malagasy ary mila tsy ho tazana intsony raha ny fahitan�ny fikambanana Feon�ny tany sy ny Aide humanitaire 2 AH azy.
Ataovy fifaninana masina e !
Vita iny ny frankofonia ! Na inona na inona hadisoan�ny mpitondra dia nisy ny ezaka sy ny fanamby ka nahatontosana azy hatramin�ny farany, ary mendrika hiderana azy ireo izany.